Akụkọ - Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. meriri aha nsọpụrụ nke “ụlọ ọrụ iri kacha elu (plastik mpempe akwụkwọ) na ụlọ ọrụ na -ahụ maka rọba China”.
N'ime ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ iri kacha elu nke China, Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. meriri aha nsọpụrụ nke "ụlọ ọrụ plastik kacha elu nke China iri (mpempe akwụkwọ plastik)". Kemgbe e guzobere ya na 1997, Lida Plastic na -agbasochi ụzọ ọkachamara na ike sitere na ngwaahịa. Site na nyocha teknụzụ na mmepe, njikwa njikwa siri ike, ọnọdụ ahịa pụrụ iche, ọrụ azụmaahịa zuru oke ama ama n'ụlọ na mba ofesi, anyị bụ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ nrụpụta na nyocha na mmepe. N'ọdịnihu, anyị ga -aga n'ihu na -eji ịnụ ọkụ n'obi, ezi obi, ike na ndị enyi sitere n'akụkụ niile nke ndụ na -ahazi echi ka mma, na -aga n'ihu.
Kemgbe e hibere ya na 1997, Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. emepụtara ọdịnala nke na -aga n'ihu na ngwaahịa na mmepe ọrụ, n'oge na -adịghịkwa anya, ọ ghọrọ ụlọ ọrụ ama ama mba ụwa. Anyị na -aga n'ihu na -emepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu nke mba ọzọ ma ruo ugbu a anyị nwere ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ 20 dị elu, akụrụngwa 35 maka ọkpọkọ na ngwaahịa plastik ndị ọzọ. The ụlọ ọrụ na -ekpuchi ebe nke 230000 square mita, na kwa afọ mmepụta karịrị 80000 tọn. Anyị bụ naanị ụlọ ọrụ depụtara ma mee ụkpụrụ mba maka ngwaahịa mpempe akwụkwọ plastik.
A na -atụle ogo ngwaahịa na ọrụ anyị dabere na ụkpụrụ na ntuziaka mba na mba. Ewezuga ime nyocha zuru oke n'ime ụlọ, anyị enwetala ọtụtụ asambodo mpụga, dịka. anyị ewerela ISO9001 International Quality Management Accredication maka ịdị mma. Na 2003 ọ nwetara asambodo ụlọ ọrụ dị elu, wee gafee asambodo maka nnwere onwe ngwaahịa na nyocha onyunyo dị mma na 2007. Anyị nwetara asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi ISO14001 na 2008. Anyị eguzobela ụgbụ ahịa zuru ụwa ọnụ, nke ndị ahịa na-akwado ebighi ebi na-akwado. na nkwalite na -aga n'ihu nke ngwaahịa na usoro. Ka ọ dị ugbu a, ebupụla ngwaahịa a n'ihe karịrị mba iri atọ, dịka America, England, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand na ndị ọzọ. Anyị nwetara ezigbo nlele site n'aka ndị ahịa anyị niile site na ikike ngwaahịa dị elu, ọnụ ahịa ọkacha mmasị na ọrụ ebe niile.